26 Responses to “ဖန်ဆင်းသူ”
ကောင်းလိုက်တဲ့စာလေး... တွေးတောစရာလေးတွေ ရသွား၏။
ဟုတ်တယ်နော်အမ။ စိတ်ဆင်းရဲ စိတ်ချမ်းသာဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ဘဲ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတယ်။
ကိုယ်သာလျှင် ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အရှင်သခင် ဆိုတဲ့စကားလေးကို သွားသတိရမိတယ်..။
မမ သားသား အသဲကွဲ ကဗျာတွေရေးတော့ဘူး အသဲလည်းကွဲတော့ဘူး အားလည်းတင်းနိုင်သွားပြီ အဲဒါ မမရေထားတဲ့ စာဖတ်လို့ပေါ့ :) အဲ မိုဒီ ကြော်ငြာ ထဲမှာပြောသလို ဖြစ်သွားပြီ ဟီး
အစ်မချောရေ..တွေးတောစဉ်းစားစရာလေးတွေကို ပြောပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ။
ဟုတ်တယ် ၊ ကိုယ့် ကိုယ် ကို သာ အားကိုးရာ စ်ြပါတယ်၊
လာ တုံးက လဲ တစ်ယောက်ထဲ ပဲ လေ၊
အဲ့ဒါ ကို ဘယ်တော့ မှ မမေ့ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ပြန်ထွက် ရင်ရော တဲ့ .. ဒီတိုင်းပါပဲ နော်။
ကိုယ်က သူများကိုလဲ ကြွေးမတင် နဲ့ ၊ သူများရဲ့ကြွေးကို လဲ
ကိုယ့် ပေါ် မှာ တင်မကျန် ခဲ့ စေ နဲ့တဲ့ ..။
OH....SUPER GOOD!!! အားတက်သွားပြီ အစ်မရေ ...:) THANK YOU ..I WILL READ UR EVERY POST :) IT'S REALLY REALLY EFFECTIVE !!!
စာကောင်းလေး တပုဒ်ပါပဲ ဖတ်သွားတယ်ချောရေ....:))
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ ဘဝတလျှောက်လုံး အားကိုးရမှာ အမှန်ပါပဲ
ဟုတ်ပချောရဲ့ ဇေလဲဒီပုံပြင်လေးဖက်လိုက်မှ သတိတရားရသွားတယ် ဟုတ်တယ်နော်
ငယ်ရွယ်နုပျိုမှု၊ သင်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို တားဆီးပိတ်ပင်မှုတွေကို မဖြစ်ရလေအောင် နက်ဖြန်ကစလို့အလှ
ပြင်မယ် ၊ ဂိမ်းများများဆော့မယ် ၊ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမဖြစ်အောင် ၀မ်းနုတ်ဆေးများများသောက်မယ် နောက် တာပါ ချောရဲ့ ဒီပို့စ်လေးအတွက်မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊ ထပ်မံ၍ အသစ်များရေနိုင်ပါစေကြောင်း...
စိတ်ခွန်အားတွေ ရသွားပြီ..။ ဒီနေ့ကစပြီး ကြည့်မှန်ထဲက လူ ပိုနုပျိုအောင်၊ ပိုပျော်အောင်ပဲ လုပ်ပေးတော့မယ်..
ဒီပိုစ်အတွက် ချောကို အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ....
ကိုယ့်ပန်းပု ကိုယ်ထု လို့ ကိုယ့် ရုပ်လုံးကို ကိုယ်ဖော်ရင်း...ကိုယ့်သမိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ရေးနေမိမှန်း
အသိ နောက်မကျအောင် လမ်းပြ စာစုလေး ပါ..
မမရေ.... မီးမီးလည်း အသဲကွဲ ကဗျာတွေမရေးတော့ဘူး အသဲလည်းမကွဲတော့ဘူး အားလည်းတင်းနိုင်သွားပြီ အဲဒါ မမရေးထားတဲ့ ဒီစာကိုဖတ်လို့ပေါ့း))) (အပေါ်က ကိုချိုကျပြောသွားသလို လိုက်ပြောကြည့်တာ ဟီးးးးးးးးး)
ချော ... ညီမလေး ကြိုက်တဲ့ စာသားလေး တခု ရှိတယ်
No one is in charge of your happiness except you တဲ့ ..
ဒီလို အတွေးကောင်းလေးတွေ အမြဲတမ်းမျှဝေနိုင်ပါစေ လို့ .....
တရားခံက ကိုယ်ပဲ .....း))
ချစ်လေးရေ ကိုယ့် ကြောင့်.....မင်းမှာတာဝန်မရှိ ....
စည်သူလွင်သီချင်း လိုပေါ့ ...
အသိပေးတဲ့ စာလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ..
ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပေါ့နော် အမ..
လူဆိုတာ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်သာ လုံးဝဥဿုံ ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်.. တစ်ခြားဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံးကို ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်လို့ မရပါဘူး… ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှု၊ အောင်မြင်မှု၊ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် စတာတွေကို ကိုယ့်ဖာသာ တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်.. သိပ်မှန်တာပဲ... သိပ်မှန်တာပဲ... အရမ်းမှန်တာပဲ.. ကိုယ်တွေ့မို့ထောက်ခံတယ်
very good post.really very good post.
မမရေ... သိပ်ကောင်းတာပဲ ပြောင်းလဲခြင်းဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါပဲဆိုတာ ဒီစာကို ဖတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အမြန်ဆုံးပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ခွန်းအားတစ်ရပ်ကို ဖြစ်စေပါတယ်
အပြည့်အ၀ထောက်ခံတယ်ဗျာ.....ကိုယ့်ကြမ္မာကို ဖန်တီးသူတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါပဲ